Chencan SG2030T မှို CNC Router - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Chenan Machinery
RV ပေါင်းစပ် Panel များထုတ်ယူခြင်းရေးစင်တာ
သစ်သား CNC Router
Chencan SG2030T မှို CNC Router
Chencan GM3012AH5 Composite ဘုတ်အဖွဲ့ CNC ထုတ်ယူခြင်းရေးစင်တာ
Chencan AT1224AD ATC CNC အသိုက်အခြေပြု Router ရေးစင်တာ
Wood ကအဘို့အ Chencan MS1325AC4ဝင်ရိုးတန်း ATC CNC Router
Chencan M1325A CNC Wood က Router စက်က F မှာရောင်းမည် ...
Chencan SG2030T ရာမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်-ခန္ဓာကိုယ်နှင့် BT40 စက်မှုဗိုင်းလိပ်တံနှင့်တသားတပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှို CNC သည် router ဖြစ်ပါတယ်။
•။ တွင်ခုံခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းချောမွေ့စွာထူသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ welded ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအဆောက်အဦးပုံပျက်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်စက်ခန်ဓာကိုယ်စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေး (VSR) တုန်ခါခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌လျက်ရှိ၏
• Z ကိုဝင်ရိုးထိထိရောက်ရောက်မော်တာရဲ့တင်ပါဝါလျော့ကျစေပါတယ်နှင့်စက်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးချဲ့ထားတဲ့ Dual-pneumatic ချိန်ခွင်လျှာဆလင်ဒါပုံစံဒီဇိုင်း, သုံးတတ်၏
•ချောမွေ့စက်မျက်နှာပြင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ, စက်ပစ္စည်းစင်တာ (ထိုင်ဝမ်ကိုဖန်ဆင်း 3.3m * 8 မီလီယံ,) / ကြိတ်စက်ခန်ဓာကိုယ်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်းထွင်းရန်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏
•စက်သတ္တုအားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ UAS Haas ကြိတ်စင်တာအားဖြင့်ထားကြပါတယ်
•အားလုံးသည်ပုဆိန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ထိန်းသိမ်းရန်စေရန်ဖုန်မှုန့်-အထောက်အထားများနှင့်အကာအကွယ်တံခါးကို (ရှေ့နှင့်နောက်ကျော) ဒီဇိုင်းသုံးတတ်၏
•စက်၏တိကျမှန်ကန်မှု: ငါတို့သည်အစီအမံဟာဖြောင့်, Vertical, တိကျမှန်ကန်မှု contouring နှင့်မဆိုသွေဖီဖို့ခေါင်းဆောင်ကိုအသုံးပြုပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့်နည်းပညာကိုတိုင်းတာခြင်းအဆိုပါတော်လှန်ရေးသမားတိ;
•ချိုးအချက်နှင့်အာဏာကျရှုံးပြီးနောက်ပြန်လည်ထွင်းထုခြင်း၏ function ကိုရှိထားသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ရှိပါတယ်;
•အားလုံးသည်အဓိကအားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူတပြင်လုံးကိုစက်သေချာစေရန်ထိုကဲ့သို့ထိန်းချုပ်မှုကက်ဘိနက်များအတွက် Schneider ခလုတ်, Omron switch ကို, အော်တိုချောဆီအရည်ကြည်, အမေရိကန်နိုင်ငံအပူလဲလှယ်, CW စီးရီးအော်တိုဗိုင်းလိပ်တံအအေးစနစ်က ... အားလုံးဒီဇိုင်းအဖြစ်ထိပ်အမှတ်တံဆိပ်သုံးစွဲ;
• 2000 * 3000 * 1000mm ထိရောက်သောအလုပ်လုပ်ဧရိယာ;
•မူရင်းထိုင်ဝမ် BT40 စက်မှုရေအအေးဗိုင်းလိပ်တံ။
•တိုက်ရိုက်ဗိုင်းလိပ်တံမောင်းထုတ်ရန်ဘေဂျင်းစူပါ servo motor ကို;
•ဂျပန် YASKAWA servo မော်တာများနှင့်ယာဉ်မောင်း;
•မူရင်းထိုင်ဝမ် Syntec controller ကို;
• X, Y ဝင်ရိုး, Z ကိုခရီးသွားဘို့ထိုင်ဝမ် TBI ဘောလုံးကိုဝက်အူအဘို့အ Helical ထိန်သိမ်းဂီယာ;
• T ကန့်ပစ်သံအလုပ်လုပ်စားပွဲပေါ်မှာ slto;
•ဂျာမဏီ Igus cable ကို;
အခမဲ့• Artcam ဆော့ဖျဝဲ
•အလုပ်အဖွဲ့ဗို့: 380V / 50HZ / 3PH သို့မဟုတ် 220V / 50HZ / 3PH;
1. သေစက်မှုလုပ်ငန်း: တစ်ဦးကလူမီနီယံ၏ပန်းပု, အမြှုပ်, ပလပ်စတစ်ခင်းအကာများ, PVC, သစ်သားပျဉ်ပြားနှင့်အခြားပျော့-သတ္တုမှို;
မှိုစက်မှုလုပ်ငန်း: စက်မှုလုပ်ငန်းအောင် 2. စံနမူနာမဆိုအမျိုးအစားကားတစ်စီးမှို, လှေမှို, foundry မှို, လေကြောင်းမှို, DIA မှို, etc, အထူးသဖြင့်သစ်သားနှင့်ထားတဲ့အထဲမှာလက်သည်းသို့မဟုတ် screw နှစ်ခုနှင့်အတူလူမီနီယံပုံစံချမှတ်ခြင်း;
3. ပြားအပြောင်းအလဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း: လျှပ်ကာ, ပလပ်စတစ်နှင့်ဓာတု, အ PCB, ကားကိုယ်ထည်ကိုရွှေ့, ဦးညှ, လမ်းကြောင်း, Anti-အထူးဘုတ်အဖွဲ့, epoxy, ဗဓေလသစ်, ကို ABS, PP, PE နှင့်အခြားကာဗွန်အရောအနှောသရုပ်ဆောင်;
ယခင်: SF2040QG-4S- mold processing center
နောက်တစ်ခု: SF1530A-5S-five axis processing center
3 ဝင်ရိုးတန်းမှို CNC Router
4 ဝင်ရိုးတန်းမှို CNC Router
5 ဝင်ရိုးတန်းမှို CNC Router
တရုတ်မှို CNC စက်စက်ရုံ
ဒီဇိုင်းမှို CNC စက်ရေးစင်တာ
EPS ရေမြှုပ်မှို CNC စက်ရေးစင်တာ
မှို CNC Router EPS
ပြင်ပက Wall ဒီဇိုင်းမှို CNC
CNC Router ပြုလုပ်ခြင်းရေမြှုပ်မှို
Foundry မှို CNC စက်
မှို CNC စက်ရုံ
မှို CNC စက်
မှို CNC စက်ရေးစင်တာ
မှို CNC စက် Center ကစက်ရုံ
မှို CNC Router
မှိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို CNC စက်ရေးစင်တာ
CNC Router စက်များပြုလုပ်ခြင်းမှို
Pump မှို CNC စက် Making
ပန်းပုမှို CNC စက်
Chencan SGS1525T အမြင့် Precision လူမီနီယမ်မှိုကို C ...
Chencan BS1325B မှိုထွင်းထုခြင်း Router စက်
အက္ခရာ တင်. M က Making Chencan SFD1530B CNC စံနမူနာ ...
Chencan SFD2040Q ပန်းပု CNC အက္ခရာ တင်. စက်
Chencan SF2040Q အကြီးစားစံနမူနာမှို Process ကို CNC ...
Chencan ကုမ္ပဏီ 200 ကျော်လုပ်သားများနှင့် 60 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာရှင်တို 13000 ㎡ခေတ်သစ်စက်ရုံနှင့်အတူဖြစ်သောရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်၏ Qihe စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်အတွက်တည်ရှိသည်။
Adress: အနောက် Mingjia လမ်း, Qihe စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်တရုတ်ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်ရှိ။
E-mail ကို: info@cccnc.cc